Posted on November 5, 2020 (November 5, 2020) by सेराेफेराे संवाददाता
स्याङ्जाका मोहनप्रसाद पाण्डे संघीय सांसद बन्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य प्रतिनिधिसभा सदस्य सुर्यप्रसाद केसीको निधनपछि खाली भएकाे स्थानमा पाण्डे सांसद बन्ने भएका हुन् । कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङ्जाका पाण्डे पहिलो संविधानसभाका सभासद हुन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ स्याङ्जा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । केसीको निधन भएका कारण बन्दसूचीमा […]
Posted in Trending News, गण्डकी प्रदेश, राजनीतिLeaveacomment
Posted on November 5, 2020 (November 5, 2020) by सेराेफेराेन्यूज
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को पहलमा बगनासकाली गाउँपालिका वडा नं. ८ बराङदीमा गठित युवा समूहको आयोजनामा बराङदीमा २ दिने युवा नेतृत्व विकास तालिम सुरु भएको छ । इन्सेक र नोरिकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित तालिमको उद्घाटन गर्नुहुँदै बगनासकाली गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडाअध्यक्ष गणेशप्रसाद बस्यालले यो युवा समूहले समुदाय स्तरमा गर्दै आएका रचनात्मक कार्यक्रमहरुबाट आफु […]
Posted in Trending News, पाल्पा सेरोफेरो, बगनाशकाली गाउपालिकाLeaveacomment
पाल्पा, कार्तिक २० पाल्पामा कोरोनाका कारण थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बिहिबार माथागढी गाउँपालिका २ का ६६ बर्षिय पुरुष र तिनाउ गाउँपालिका ६ का ४४ बर्षिय पुरुषको मृत्यु भएका स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । यससँगै पाल्पामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ । दुबै जनाको तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा […]
Posted in Trending News, तानसेन नगरपालिका, तिनाउ गाउपालिका, मुख्य समाचारLeaveacomment
पाल्पा जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा धमाधम परीक्षा सुरू भएकाे छ । अधिकांश विद्यालयले कक्षा १ देखी १० सम्मकाे परीक्षा तालिका नै प्रकाशन गरेर विद्यालयमा विद्यार्थीकाे भाैतिक उपस्थितीमा परीक्षा सुरू गरेका हुन् । काेभिड १९ ले विश्व प्रभावित भैरहेकाे समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने अन्याैलका बिच कतिपय विद्यार्थीहरू विद्यालयकाे पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । माथागढी गाउँपालिकाभित्रका […]
Posted in Trending News, तानसेन नगरपालिका, पाल्पा सेरोफेरो, माथागढ़ी गाउपालिका, रिब्दिकोट गाउपालिकाLeaveacomment
रम्भा गाउँपालिका –४ बगचौर पाल्पामा ट्याक्टरले किचेर एक पुरूषकाे मृत्यु भएको छ । बुधबार लु ३ त ९८१२ नम्बरको ट्याक्टरले किच्दा ६६ वर्षीय टिकाबहादुर जिसीकाे मृत्यु भएकाे हाे ।् राती १० बजेको समयमा धान लोड गरेर हुमिन तर्फ जाँदै गरेको पराल मुनि सुतिरहेका सोही स्थानका ६६ वर्षीय टिकाबहादुर जिसीलाई किच्न पुग्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी […]
Posted in Trending News, पाल्पा सेरोफेरो, रम्भा गाउपालिकाLeaveacomment
शारिरिक सम्पर्कपछि छुटाउनै नहुने यी काम धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ !
काठमाडौँ, महिला र पुरुष बिच हुने शारिरिक सम्बन्धकै कारण आज मानव सभ्यता रहिरहेको छ । शारिरिक सम्बन्धको क्रममा हुने सानो सानो गल्तीको कारण पनि थुप्रै नकारात्मक असरहरु देखिने गर्छन् । शारिरिक सम्बन्धले पार्ने असरबारे गरिएको विभिन्न अनुसन्धानले यसको असर बारे छुट्टा छुट्टै तथ्याङहरु फेला परेको छ । शारिरिक सम्बन्ध पछि थकान मेट्नको लागि निदाउने गर्नाले […]
बिष्णु खनाल पाल्पा, कार्तिक २० पश्चिम पाल्पाको सुन्दर ढुङगा-जुठापौवा सालझण्डी सडक खण्ड कालोपत्रे हुने भएको छ । करिब ८ करोड ४५ लाख, ३७ हजार २ सय ६६ रुपैयाँको लागतमा सडक कालोपत्रे हुने भएको होे । आगामी बर्षको पौष ५ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरि योजना अगाडी बढाईएको रैनादेवीछहरा गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय सरकारको समपुरक […]
Posted in मुख्य समाचार, रैनादेवी छहरा गाउपालिकाLeaveacomment
काेराेना अस्पताल बनाउँदै तिनाउँ गाउँपालिका, निर्माण अन्तिम चरणमा
Posted on November 5, 2020 (November 5, 2020) by सेराेफेराे डेक्स
दाेभानमा कोराेना अस्पतालको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तिनाउँ गाउँपालिका २ दोभानको वोटेगाउँमा निर्माण भइरहेको अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाे हाे । ८ वेडको क्षमताकाे अस्पतालको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ती मगरले बताए । उनी भन्छन्, “अहिले कोरोना पोजेटिभ भएकालाई अस्पतालमा लैजादा वेड नपाएर फिर्ता गराउन बाध्य […]
Posted in Trending News, तिनाउ गाउपालिका, पाल्पा सेरोफेरोLeaveacomment
हेलम्बुलाई स्याउको गाउँ बनाइने भएको छ। करिब ३७ वर्षपछि सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकीय गाउँ हेलम्बुमा फेरि स्याउ फल्न थालेपछि हेलम्बुलाई पुनः स्याउको गाउँ बनाउन स्थानीयवासी जुटेका छन्। विसं २०४० सालपछि स्याउ फल्न छाडेको र स्याउमा रोग लागेपछि स्याउका रूख नै काटिएको थियो। अहिले हेलम्बुलाई फेरि स्याउको गाउँ बनाउन स्थानीय युवाहरू जुटेका छन्। स्याउ फल्न शुरू गरेको पहिलो […]
Posted in Trending News, आर्थीक, प्रदेश १Leaveacomment
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन जितको नजिक पुगेका छन्। विस्कन्सिन र मिसिगन राज्यको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेपछि बाइडेनको अग्रता लिएका हुन्। १६ इलेक्टोरल मत रहेको मिसिगन राज्यमा बाइडेन विजयी हुने प्रक्षेपण प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका छन्। यससँगै बाइडेनको इलेक्टोरल मत २६४ पुगेको छ भने डोनाल्ड ट्रम्पसँग २१४ मत छ। बाइडेनले झिनो अग्रता लिएको नेभाडा […]
चिसोपानीले नुहाउनुस् आफ्नो तौल घटाउनुस्
स्वस्थ रहनका लागि स्लिम हुनु जरूरी हुन्छ । मोटो मान्छेलाई अनेकौं रोगले सताउँछ । एकचोटि तौल बढेपछि घटाउनका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कसैले जिम धाउँछन् भन्ने अरूहरू डाइटिङ गर्छन् । तर तपाईंलाई थाहा छ, चिसो पानीले नुहाउँदा पनि तौल घट्छ । शरीरमा दुई किसिमका बोसोहरू हुन्छन् : सेतो र खैरो । […]
Posted in Trending News, uncatogorized, मनोरञ्जनLeaveacomment
कक्षा १२ को परीक्षा विद्यार्थीले जहाँ छन् त्यहीँबाट दिन पाउने
काठमाडौँ : कक्षा १२ को परीक्षा विद्यार्थी जहाँ छन्, त्यहीँबाट पनि दिन सक्‍ने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-१९ को जोखिमको विषम स्थितिमा विद्यार्थी जहाँ छन् त्यहीँबाट परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएका हुन् । आगामी म‌सिर ९ देखि १६ गतेसम्म सञ्‍चालन हुने परीक्षाका सन्दर्भमा बुधबार शिक्षामन्त्री पोखरेलले […]